Uyifumana njani kwakhona ifolda yokukhuphela kwi-Dock ukuba siyicimile | Ndisuka mac
Uyifumana njani kwakhona ifolda yokukhuphela kwi-Dock ukuba siyicimile
Xa ukhuphela nayiphi na ifayile kwi-intanethi, yonke imixholo ikhonae igcinwe ngqo kwifolda yokukhuphela, incwadi eneenkcukacha esinokufikelela kuyo ngokuthe ngqo kwiDock, kuba ikufutshane nomgqomo wokuphinda usetyenziswe. Ngokuhlala unefolda uhlala usesandleni, akuyomfuneko ukukhangela i-Finder ekhangela iifayile ezikhutshelweyo okanye ukubona ukuba incinci kangakanani i-desktop yethu igcwalisa ngeefayile, kwiimeko ezininzi zililize. Kodwa kuya kuthini ukuba ifolda yokukhuphela isuswe ngengozi? Ngokusebenzisa isiKhangeli sinokufikelela kuso, kodwa sele ifuna ukuba senze ngaphezulu kwesinyathelo esinye ukuze siphulukane nokukhawuleza.
Ngethamsanqa, le ngxaki incinci inesisombululo esilula. Esi sisombululo sinye esinokusisebenzisa ukubeka kwi-Dock nayiphi na incwadi esifuna ukuhlala sinayo kwaye siyeke ukuvula i-Finder eyonwabileyo ukuba isoloko ingena kulawulo olunye. Ukubeka ifolda yokukhuphela kwakhona kwiDock, kufuneka siqhubeke ngolu hlobo lulandelayo.
Buyisela ifolda yokukhuphela kwiDock
Kuqala sivula ifayile ye- Finder
Emva koko uye kwimenyu ephezulu kwaye ucofe kwimenyu Ir. Emva koko ucofe ukhetho yokuqalisa.
I-Finder iya kusibonisa zonke iifolda zenkqubo ezinikezelwe kumsebenzisi wethu. Ukubonisa ifolda yokukhuphela kwakhona, kufuneka sukhethe kwaye urhuqe uye kwiDockNgokukodwa kwindawo eyayikade ikho ngaphambili.
Nje ukuba siwenzile lo msebenzi, siza kubona ukuba kanjani ifolda yokukhuphela iyavela kwakhona kwindawo yoqobo.
IMacOS ayisivumeli ukuba sifumane nayiphi na incwadi eneenkcukacha kwiZicelo zeDock, Ke ngoko, zombini ifolda yokukhuphela kunye nayo nayiphi na incwadi esifuna ukuyongeza kwiDock, kufuneka ibekwe kwicala lasekunene layo, ngezantsi komgca wokuma nkqo ecaleni kwesicelo sokugqibela esibonisiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyifumana njani kwakhona ifolda yokukhuphela kwi-Dock ukuba siyicimile
intle kakhulu .. Ndiyicimile loo folda ngempazamo kwaye ndacinga ukuba ndilahlekile ulwazi .. Ndiyibuyisele ngokulandela oko kuthethwa sisithuba. enkosi kakhulu
Ndiwenza la manyathelo kwaye ifolda iyavela kwakhona ecaleni kwenkunkuma. Ingxaki kukuba ngaphambi kokuba ndiyicime ngengozi, ifolda yokukhuphela kwidesika ibonise uluhlu luye phezulu kunye nolwangoku kwaye ngoku kuvula iwindow ngalo lonke ukhuphelo ngaphandle komyalelo kwaye andikwazi ukubuyela kwifolda yoqobo yaseburhulumenteni. Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ungayitshintsha njani ifolda kwi-Mac's dock ukuphinda-udwelise ukhuphelo lwamva nje? Enkosi
camila uAndrea sitsho
Ndingathanda ukuba bangakunika impendulo ungabelane nam kuba ndinengxaki efanayo ... pls
Phendula u-camila andrea
Kwi icon ebebekwe edokeni nakwimenyu yayo yokungena, khetha ukhetho "lweFan" phantsi kwe "Jonga umxholo njengo". Ukubulisa.
Khange ndiyicime ifolda, andisayikhumbuli tu. Ndivele ndanyamalala kumazibuko. Ngolwazi lwakho, ndiyifumene kwaye ndayibeka apho yayikhona ngaphambili. Enkosi kakhulu.
IPablo QM sitsho
Enkosi kakhulu! Ndiyicimile ngengozi kwaye ngoku ngengcaciso yakho ndikwazile ukufumana i icon yokukhuphela kwiDock kwakhona!
Phendula Pablo QM
enkosi kakhulu! Ndiyenzile nje eCatalina kwaye ngaphandle kwengxaki ... ngo-Epreli 2020
Ndongeza kumagqabantshintshi kum kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ... ndinengxaki ... ngoku iifolda zikulandelelwano lwealfabhethi hayi ngokulandelelana kwazo ... azindikhonzi kakuhle? Ndizilungisa njani?
Ngempazamo ndacima ifolda ndaza ndayibuyisela eDock, kodwa andikwazi ukuyibuyisela umva, kwaye ngenxa yoko akunakwenzeka ukuba ndifumane nantoni na. Ungandinceda? enkosi
Beka imouse ngaphezulu kwifolda yokukhuphela kwaye ucofe iqhosha lasekunene le mouse. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokubonisa ezibonisiweyo kwaye unokukhetha imowudi yeFan.
Isalathiso esihle, sendiyenzile kwaye ifolda yokukhuphela yavela kwiDock
U-ernesto alonso garcia utshatile sitsho
enkosi uncedo olukhulu
Phendula u-ernesto alonso garcia casado
Enkosi, incam eluncedo kakhulu
I-Adobe iveza iprojekthi yeSchulbler yokufaka imibala kwiifoto ezimnyama nezimhlophe ngenxa ye-AI
Beat the Game, ifika namhlanje kwiVenkile ye-Mac App